Imidlalo Yeethrone | June 2022
Kutheni uGeorge engayi kumvumela uGeorge ukuba agqibe ‘imimoya ebusika’?
Ingoma ethi 'Ingoma yoMkhenkce noMlilo' ithi ifuna ngamandla ukugqiba uluhlu lwayo lwentengiso 'isavenge esilandelayo. Ke kutheni eqhubeka ebeka ezinye iiprojekthi kuqala?
Baphi ngoku: I-Adventures ka-Arya ngonyaka emva kokuPhumela kwiNtshona yeWesteros
Intombazana encinci yaseStark yahamba ngenqanawa yaya kumazwe angakhange enzelwe nemephu okwangoku. Imiceli mngeni-kunye neempendulo kwiimfihlakalo ezininzi ezingasombululwanga-kusenokwenzeka ukuba wayemlindile.
Izibini (kunye neTrrouples) Sithumela 'kwiMidlalo yeTrone' Ixesha le-8
Ngaba uBrienne kufuneka aphele ngeTormund okanye uJaime? Ngaba uJon Snow uza kufumana uthando? Kwaye kuthiwani ngesondo uThixo Pod? Nalu uphawu lwabasebenzi beRinger abanethemba lokuphela kunye xa uthuli luhlala eWesteros.
Uhlobo lweBinge: 'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' | Ixesha 1
Bhalisa: Apple Podcasts / RSS / SoundCloud / Stitcher
Kanye Kuphele kangakanani 'uMdlalo weZihlalo zobukhosi' Ngaba uGeorge RR Martin wayengowakhe?
Ezinye zeempawu zabalinganiswa kubonakala ngathi zazichazelwe 'kwiNgoma yoMkhenkce kunye noMlilo,' ngelixa ezinye zinokubonisa kuphela izinto ezenziweyo
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ukuphela okuKhululekileyo: Yintoni efunwa nguJaqen kunye naMadoda angenanto?
Siyazi ukuba ababulali bakaBraavosi balungile nge-catchphrase, kodwa yintoni i-backstory kaJaqen H'ghar, kwaye yintoni yena nabanye abakhonza uThixo oManyeneyo emva koko?
Indoda Eyathetha 'Umdlalo Wetrone' Kubekho
Ngaphambi kokuba kufike i-HBO, kwakukho uRoy Dotrice, umdlali weqonga owadala amakhulu amazwi kwiincwadi ezimanyelwayo zeenoveli zikaGeorge RR Martin, ezisa iWesteros ebomini kwizigidi zabaphulaphuli
Ke, Ngubani iNkosana (s) Ngubani owathenjiswayo?
Umboniso ubonakale ufulathela isiprofeto sikaAzor Ahai kwisiqendu seCawa. Ngaba kubalulekile ekuphelisweni kothotho?
Ukubeka abalinganiswa abangama-101 abagqwesileyo abafa kwi 'Game of Thrones'
Into efileyo ayinakuze ife, nangona abanye abantu abafileyo bebhetele kunabanye. Makhe sahlule abalungileyo (uTywin Lannister) kokubi (u-Olly) kunye nento engenamsebenzi kwaphela (uxolo, iinyoka zesanti).
UkuFundwa ngokuValiweyo kweSkripthi seSiqendu sokuGqibela 'seMidlalo yeTrone'
Inayo yonke into: ukubuyela umva, iziqhulo ezingasebenzi ncam, izithuba ekuqiqeni, ukungahoyi ngokupheleleyo iintsomi, kunye nokuphambuka ekubhekiseni kwiRolling Stones
Ngaba 'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' ulibele malunga nokwaphula ivili?
Idabi phakathi kwabaphilayo nabafileyo linikezele iiyure zokugqibela kumdlalo wezopolitiko, kodwa njengoko ababukeli belinde ukubona ukuba ngubani ophumelela isihlalo sobukhosi se-Iron, bashiyeka bezibuza into ebalulekileyo: Yintoni eza kwenziwa nguDaenerys, uJon, uSansa, okanye nayiphi na abo babeza kuba ngabalawuli benza ntoni ukuba bayifumene?
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi,' 'Ukunyuka kweSkywalker,' kunye neMiceli mngeni yeFandom yanamhlanje
Ezimbini zeepropathi ezinkulu zenkulungwane zisongele amabali azo ngokusilela okubalulekileyo. Kutheni behlulekile ukunamathela kokufika kwabo?
Kwenzeka ntoni kwiMiboniso ekwakufuneka ukuba ibe 'yiMidlalo yeTrone' elandelayo?
Yonke inethiwekhi kunye nokusasaza bekukhangela uthotho olunokuba sisiqwengana se monoculture, kodwa ukuza kuthi ga ngoku akukho nto ibambe umdla wehlabathi njengokulwa kweTrone Trone
Dlala umdlalo wethu wokufa 'weMidlalo yeTrone'
Khuphisana nabahlobo bakho kwaye uzame ukuqikelela ukuba ngabaphi abalinganiswa abaya kuhlala kwaye ngubani oza kufa
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ukuphela okuPheleleyo: Uya kufunda nini uMhlaba wonke malunga noVuko lukaJon?
Umlawuli wenkosi owayesakuba lixesha washiya iNight’s Watch, waba ngukumkani, wanxulumana nokumkanikazi, waza waya emfazweni. Kutheni le nto abantu abaninzi-ngakumbi iDaenerys Targaryen- bebuza njani kwaye ngoba?
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ukuphela okuKhululekileyo: Kwenzeka Njani ukuba iPod ibe nguThixo weSondo?
Ngexesha le-3, i-squire ye-Tyrion eyintombi yayilungile ebhedini kangangokuba abafazi abathathu abavela kwi-brothel yase-Littlefinger bayala intlawulo. Indlela azibhaqe ngayo izipho zakhe zihlala ziyimfihlelo engaziwayo.
Amandla-Ukubeka iiNdawo eziPhambili ezingama-25 'kwiMidlalo yeTrone' kwiMbali
Ukusuka kuKumkani wasebusuku ukuya kuTywin Lannister, eRamsay Bolton ukuya kuJoffrey Baratheon, e-Euron Greyjoy ukuya eCraster, nazi iindawo ezingcolileyo kumhlaba womkhenkce nomlilo ongena kwiXesha le-8 le-HBO's epic
Ixesha elide: Ngaba 'uMdlalo weZihlalo zobukhosi'
Phakathi kwe 'Dexter,' 'Umdlalo weZihlalo zobukhosi,' kunye 'nendlela endidibana ngayo noMama wakho,' kusondele kakhulu
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ukuphela okuKhululekileyo: Ngaba Tyrion in Love With Daenerys?
Isandla sokumkanikazi sajonga ngokulangazelela xa uJon noDany bagqiba ukudlala ngothando kwabo ekupheleni kweXesha lesi-7.Ngaba iTyrion yayicinga nje ngombuso ngelo xesha, okanye ingaba inqwenela enye into?
'Umdlalo weZihlalo zobukhosi' Ukuphela okuKhululekileyo: Ngaba i-Daenerys ingaba nabantwana?
Umama weDragons ukholelwa ukuba uludlolo, kodwa umntwana onokuzalwa kuye kunye noJon Snow bangashukuma ixesha le-8 kwaye ekugqibeleni banokuhlala esihlalweni seTrone.
Iinkunzi zeegusha ezingcwele zaphoswa ngumnxeba
umdlalo wetrone pod
Abadlali abaphezulu be-10 nba namhlanje
zonke iidanga kunye ne-bachelorettes
nfl qb ubungakanani besandla